Nhau - Ndeapi mabhenefiti eAnoshanduka Valve Nguva Yemaitiro?
Ndeapi mabhenefiti eiyo Anochinjika Valve Nguva Yemaitiro?
Kubva pakauya injini, vanhu havana kumira kugadzirisa kwaari, uye takaonawo zvizvarwa zveinjini nyowani dzakatamiswa dzakasiyana kubva hukuru kusvika kudiki. Nekuwedzera kwemotokari, isu takaunza dambudziko rinotyisa remagetsi. , Oiri, sosi isingadzoreke, inoneta zvishoma nezvishoma nekuchera kwedu kwemazuva ese. Sevapenyu, hatifunge nezvesimba kana kuchengetedza zvimwe zviwanikwa kuchizvarwa chinotevera. Nemabasa edu einjiniya, isu takagadzira mhando nyowani yesimba-rinoponesa injini uye takaunza hunyanzvi hwekuchengetedza mafuta. Nhasi mota injini vharafu mutengesi ichagovana newe mabhenefiti eiyo inoshanduka vharuvhu yenguva system.
Mukuwedzera kune kubvongodza uye turbine (kana kuwedzera kweanogadzira), izvo zvinokanganisa mweya uri musilinda zvinosanganisira mavhavha.
Kazhinji kutaura, iyo vharuvhu inoshanduka inosanganisira akati wandei akasiyana emhando dzakasiyana: kusiyanisa nguva padivi rekutora, kusimudzira kwakasarudzika padivi rekutora, kusiyanisa nguva padivi rekubuda, uye kusimudzira kwakasiyana padivi rekubuda. Dzimwe injini dzine imwe chete yadzo, uye dzimwe injini dzine dzakawanda dzadzo panguva imwe chete. Naizvozvo, iyo "shanduko yekudyiwa" tekinoroji yeinjini dzakasiyana hazvireve hazvo zvakafanana maererano nemaumbirwo.
Nheyo yekusiyanisa vharuvhu nguva
Iyo yekushanda musimboti yechina-sitiroko peturu injini yatinoziva. Iwo mana ekurova anoshanda ekutsveta, kumanikidza, basa, kupera, uye kuenderera kwekutenderera basa reinjini zvine simba risingapatsanurike panguva yekuvhura neyekuvhara yeiyo throttle. Wese munhu anoziva kuti vharafu inotyairwa ne crankshaft yeinjini kuburikidza neye camshaft, uye iyo vharuvhu nguva inoenderana nekona yekutenderera yecamshaft. Pane injini yakajairika, yekuvhura uye yekuvhara nguva yevhavha yekudyara uye yekuzadza vharuvhu yakatarwa. Iyi nguva yakatarwa yakaoma kufunga nezve kushanda kweinjini kumhanya kwakasiyana. Tinoda kuita kuti injini isvike pakukwirira Kubudirira Kazhinji isu tinoshandura iyo α yekurerekera kona yecamshaft kuti tishandure nguva yekuvhura neyokuvhara yeiyo throttle kuti ibudirire inokurumidza nguva yebasa kuti ibudise yakakura kinetic simba. Iye zvino isu tine kusiyanisa vharuvhu nguva yekugadzirisa izvi zviri nyore. Sravana Sameeralu Serial 4th Technology.
Variable vharuvhu nguva tekinoroji iri yakapusa dhizaini uye yakachipa-mutengo mashandiro system mune iyo yese kusiana vharuvhu nguva yekugadzira Iyo inoshandisa hydraulic uye giya kufambisa nzira kugadzirisa zvine simba nguva yevhavha zvinoenderana nezvinodiwa zveinjini. Variable vharuvhu nguva haigone kuchinja iyo nguva yevhavha kuvhura, asi inogona chete kudzora iyo nguva yekuvhura kana kuvhara iyo vharafu pamberi. Panguva imwecheteyo, haigone kudzora vharuvhu yekuvhura sitiroko senge inoshanduka camshaft, saka ine mashoma maitiro ekuvandudza mashandiro einjini.
Panyaya yekuchinja-chinja vharuvhu nguva, iyo HONDA injini ine imwe lead. Kana injini ichimhanya yakaderera mutoro, iyo diki pisitoni iri munzvimbo yepakutanga, uye matatu ma rocker maoko akapatsanurwa. Iyo huru cam uye yechipiri cam inosundira iyo huru rocker ruoko uye yechipiri rocker ruoko zvichiteerana. Chengetedza kuvhura nekuvhara mavhavha maviri ekudyiwa, iyo yekusimudza vharuvhu ishoma, mamiriro acho akafanana neinowanzo injini. Kunyangwe iyo yepakati cam inosundira iyo yepakati rocker ruoko, nekuti iwo ma rocker maoko akapatsanurwa, mamwe maviri ma rocker maoko haadzorwe nawo, saka kuvhura nekuvhara mamiriro evhavha hakuzokanganisike.
Asi kana injini ikasvika pane imwe seti kumhanya (semuenzaniso, apo Honda S2000 mota yemitambo inosvika 5500 rpm pa3500 rpm), komputa inoraira iyo solenoid vharuvhu kuti ishandise iyo hydraulic system nekusundidzira iyo diki pisitoni mune rocker ruoko kuti gadzira maoko matatu edombo akavharirwa mumuviri mumwe uye anotyairwa nepakati cam pamwechete. Sezvo iyo yepakati cam iri yakakwirira kupfuura mamwe makamera uye iine yakakura kusimudza. Motokari zvikamu injini vharafu inowedzera uye kusimudza kunowedzerwawo. Kana injini ichimhanya ichidonhedza kune imwe seti yekumhanyisa kumhanya, iyo hydraulic kumanikidza iri mudombo inodzikira, iyo pisitoni inodzokera panzvimbo yayo yepakutanga pasi pekuita kwechirimo chekudzoka, uye mawoko matatu edombo akaparadzana.
Neiyi nzira, iwe unogona kudzora yako yekushandisa peturu pane yakaderera kumhanya, uye panguva imwechete kusangana nezvaunoda zvekuwedzera simba kuburitsa kana injini iri pakakwirira kumhanya. Iyo yese VTEC system inodzorwa neinjini main computer (ECU). ECU inogamuchira uye inogadzirisa ma parameter einjini sensors (kusanganisira kumhanya, kumanikidza kudya, kumhanya kwemotokari, tembiricha yemvura, nezvimwewo), zvinobuda zvinowirirana nemasaini ekudzora, uye inogadzirisa rocker piston hydraulic system kuburikidza nemagetsi e solenoid Saka kuti injini itariswe ne makamera akasiyana pakumhanya kwakasiyana, izvo zvinokanganisa kuvhura uye nguva yevhavha yekudya. Saka kuti ubudise simba rinobuda iwe raunotarisira kuwana.